गण्डकी प्रदेश जम्मा ५४ भेन्टिलेटर, आइसियू खोज्दाखोज्दै गयो दुई संक्रमितको ज्यान – Health Post Nepal
गण्डकी प्रदेश जम्मा ५४ भेन्टिलेटर, आइसियू खोज्दाखोज्दै गयो दुई संक्रमितको ज्यान
२०७७ असार १५ गते १२:४४
फाइल तस्बिर टेकू अस्पताल आइसियू
गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट स्याङ्जाका दुई पुरुषको मृत्यु भइसकेको छ। उनीहरू दुवै श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि उपचारका लागि पोखरा आएका थिए।
उपचारका क्रममा दुवैको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा मृत्यु भएको हाे। आइसियू बेड र भेन्टिलेटर नहुँदा दुवैलाई पोखरा रेफर गरिएको थियो।
कोरोना भाइरसको मुख्य संक्रमण छातीमा हुने र श्वासप्रश्वासमा बढी समस्या हुने भएकाले गम्भीर खालका संक्रमितलाई राख्न आइसियू नै चाहिन्छ। तर प्रदेश राजधानी पोखराबाहिर जटिल स्वास्थ्य समस्या परे उपचार सम्भव छैन।
स्याङ्जामात्रै होइन, गण्डकी प्रदेशका अरु जिल्लाको समस्या पनि उस्तै छ। कोरोनाकै छेकोमा प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा आइसियू स्थापनाका लागि जेठ ६ मा बजेट दिइसकेको छ। तर, अस्पताल अझै टेन्डरको प्रक्रियामै छ।
गण्डकी प्रदेशको वैशाख १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै जिल्ला अस्पतालमा आइसियू स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले भने, ‘हामीले गोरखा र धौलागिरि अञ्चलबाहेक अरु अस्पताललाई लगभग १४ करोड पठाएका छौं। सामान बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले बेड बनिसकेको छैन। अस्पतालहरूले टेन्डर आह्वान गरेका छन्।’
प्रदेश सरकारले मनाङ र मुस्ताङमा २ बेड र अरु जिल्ला अस्पतालमा ५-५ बेडको आइसियू बेड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुनै अस्पतालले पूर्वाधार थप गरे-नगरेकोबारे खोजी गरिरहेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण देखिँदासम्म जम्मा १ सय ३२ आइसियू बेड र ५४ भेन्टिलेटर रहेको तथ्यांक स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले सार्वजनिक गरेको थियो।
सबै अस्पताललाई आइसियू बेड र भेन्टिलेटर संख्याबारे जानकारी गराउन भनिएको महाशाखा प्रमुख केसीले बताए। ‘लिखित रूपमा आइसियू र भेन्टिलेटर संख्याबारे जानकारी गराउन अस्पताललाई भनेका छौं। अब उनीहरूले मौखिक जानकारी गराए पनि हामीले अस्पतालमा पसेर हेरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘लिखित आएपछि जानकारी गराउँला।’
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण देखिँदासम्म जम्मा १ सय ३२ आइसियू बेड र ५४ भेन्टिलेटर रहेको तथ्यांक स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले सार्वजनिक गरेको थियो। कोरोनापछि धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा एउटा आइसियू थप हुनुबाहेक जटिल अवस्थामा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा कुनै उपलब्धि छैन।
कुनै जटिल स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भए बिरामीलाई पोखरा नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीको तथ्यांकअनुसार प्रदेशका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा १ सय ३३ आइसियू र ५४ भेन्टिलेटर छन्। प्रदेशभर अस्पतालको संख्या ८५ छ। तीमध्ये ६३ निजी र २२ वटा सरकारी अस्पताल छन्।
कुन अस्पतालमा कति आइसियू, कति भेन्टिलेटर?
गण्डकी प्रदेशमा १ सय ३३ आइसियू भए पनि सरकारी अस्पतालमा जम्मा १२ वटा आइसियू बेड छन्। तीमध्ये ११ वटा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र एउटा धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा छ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार प्रदेशभर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दुई वटाबाहेक अरु सरकारी अस्पतालमा भेन्टिलेटर सुविधा छैन। बाँकी सबै आइसियू बेड र भेन्टिलेटर पोखराका निजी अस्पतालमा मात्रै छ। पोखराबाहिरका निजी अस्पतालमा भने आइसियू बेड र भेन्टिलेटर दुवै छैन।
भारतीय लगानीमा सञ्चालित प्रदेशकै ठूलो निजी अस्पताल मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा ३२ वटा आइसियू छ।
गण्डकी मेडिकल कलेजमा २३, चरक मेमोरियल हस्पिटलमा १६, कास्की सेवा हस्पिटलमा १०, फिस्टेल हस्पिटलमा ९, पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पतालमा ७ वटा आइसियू छन्।
त्यसबाहेक फेवा सिटी हस्पिटलमा ६, ग्यालेक्सी हस्पिटलमा ६, रिजनल हस्पिटलमा ५, मेट्रो हस्पिटलमा ४, नमस्ते हस्पिटलमा २ र पार्कल्यान्ड हस्पिटलमा एकमात्रै आइसियू बेड छ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै भेन्टिलेटर मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा १५ वटा छन्। त्यसपछि गण्डकी मेडिकल कलेजमा १० वटा, चरक मेमोरियलमा ६ वटा, फिस्टेलमा ४ वटा, पश्चिमाञ्चल सामुदायिक, कास्की सेवा र फेवा सिटीमा ३–३ वटा भेन्टिलेटर छन्।
पोखराकै नमस्ते र मेट्रो हस्पिटलमा २–२ वटा, पार्कल्यान्ड, ग्यालेक्सी र रिजनलमा १–१ वटा भेन्टिलेटर छन्। एउटा पनि आइसियू बेड नभएको साई अर्चना हस्पिटलमा एउटा भेन्टिलेटर छ।
कस्तो अवस्थामा चाहिन्छ आइसियू र भेन्टिलेटर ?
डा. युक्तनारायण रेग्मी
कन्सल्टेन्ट फिजिसियन, पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल, पोखरा
आइसियू सिरियस बिरामीलाई राखेर उपचार गर्ने ठाउँ हो। त्यसमा बिरामीको अवस्था मोनिटरिङ गर्नेदेखि लिएर बिरामीलाई कृत्रिम श्वासप्रश्वास दिन भेन्टिलेटर हुनुपर्छ। श्वासप्रश्वासमा समस्या भएमा शरीरका अन्य अंगले काम नगरे आइसियूमा राख्नुपर्छ।
अझ आइसियूभित्रै डायलासिस सेवा पनि हुन्छ। पोखरामा हामीले अझै पनि नियमअनुसारको आइसियू चलाउन सकेका छैनौं भने बाहिर त्यो सम्भव छैन। कम्पनीअनुसार भेन्टिलेटर सामान्य १० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ।
भेन्टिलेटरको साथै मोनिटर, बिरामीलाई औषधि दिन इन्फ्यूजन पम्प चाहियो, सिरिन्ज पम्प चाहियो। आइसियू सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्छ।